Ikhonkrithi yezityalo ezixuba i-SjHZS75-3E iinkonzo zabathengi baseMyanmar | Shantui
Umzimveliso weKhonkrithi yokuKhanya kweKhonkrithi yoRhwebo
Ikhonkrithi yezityalo ezixuba i-SjHZS75-3E iinkonzo zabathengi baseMyanmar
Isityalo sokuxuba ikhonkrithi yaselwandle iShantui Janeoo SjHZS75-3E sigqibe ngempumelelo ukuveliswa kwemithwalo enzima ngo-Okthobha 9,2020 Ngexesha leentsuku ezininzi zesikhokelo esikude, ivula indlela yokwenza ixabiso kubathengi baseMyanmar.
Ukuchaphazeleka kwimeko yobhubhane, injineli yenkonzo emva kokuthengisa ayinakuya kwisiza saseMyanmar ukufumana isikhokelo.Shantui Janeoo unikeze isikhokelo esikude nge-intanethi ukubonelela ngofakelo kunye neenkonzo zekhomishini. Ngenxa yenkqubela phambili ecothayo kulwakhiwo lwesiza, ukufakelwa kukwaxeshana, isebe lenkxaso yenkonzo yoyisa ubunzima obuninzi ukukhokela umthengi ngomonde. Emva kweenyanga ezine zomsebenzi onzima, isityalo sokuxuba ikhonkrithi yaselwandle SjHZS75-3E ekugqibeleni yaqonda ukuveliswa komthwalo onzima. Umthengi wanelisekile ziziphumo zezixhobo.
Kwinyathelo elilandelayo, uShantui Janeoo uza kusebenzisa itekhnoloji entsha ukuphucula iindlela kunye neendlela zesikhokelo esikude ukuphucula ukusebenza kwesikhokelo esikude kunye nokuqinisekisa ukuba iimveliso ezikumgangatho ophezulu zisiwa kubathengi ngendlela ekhethekileyo.